MakeOwn.App - Dhisaha App Mobile ee macruufka iyo Android
Turjum oo hel App bilaash ah!
Dhismaha Websiteka Qalabka Dhismaha Qalabka
U Samee Barnaamijyadaada Mobile -ka ah
IOS iyo Android oo aan wax dhib ah lahayn!
MakeOwn. Waxaa taageeray BuildFire waxaana lagu marti qaaday server -yada AWS.
Mashruucayaga dhismaha app wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada iyo ganacsatada adduunka oo dhan inay dhisaan
oo daabacaan barnaamijyo guulaystay, iyada oo aan la qorin hal koodh.
Bilow Maxkamadeynta 30-Maalmood
Looma baahna Kaarka amaahda
Qalabka Dhismaha Qalabka
Kaliya jiid-oo-tuur jidkaaga adoo ka dhisaya app meel xoqan, ama habee mid ka mid ah sheybaarada.
Madal Awood leh oo Dabacsan
Mashruucayaga dhismaha app -ku waa mid awood badan oo dabacsan oo ku filan inuu kula cabirro marka ganacsigaagu kobco.
Iibsashada In-App iyo Dukaamee
U oggolow sifooyinka elektaroonigga ah abkaaga oo billow ka-abuurista waxyaabaha aad ka kooban tahay ama si fudud u iibso alaabta.
Si fudud Ugu Daabac Suuqyada
Hal-gujin waa waxa kaliya ee ay qaadanayso si aad u hesho in barnaamijyadaada lagu daabaco Apple App Store iyo Google Play Store.
Barnaamijyo si buuxda loo habeyn karo
Dhismeheena moobiilka moobiilka ee DIY wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u habaynayso dhinac kasta oo ka mid ah barnaamijkaaga adigoon wax koodh ah qorin.
Ogeysiisyada riixitaanka firfircoon
Kordhi hawlgelinta iyo haynta dhagaystayaashaada, adoo diraya farriimaha wargelinta riixitaanka caqliga leh.
Wax Badan Ka Baro Madalkeena
Si sahal ah ugu dar shaqeynta awooda leh abkaaga oo leh plugins.
Suuqa Suuqgeena waxaa ku jira waxqabad aad u ballaaran oo daboolaya inta badan baahiyaha app kasta.
Si aad u hesho caadooyin aad u sarreeya ama astaamo u gaar ah, waxaad horumarin kartaa fiiladaada, ama aan kuu horumarinno.
Xalka Hal-ku-jirka ah ee lagu Dhisayo App
Halis la'aan iyo Qanacsanaanta Waa La Ballan qaaday
U Dhiso Isku Mar Dhammaan Aaladaha
U beddelo Shabakadahaaga iyo Blog -yadaada Barnaamijyo
Ku Turjun Abkaaga Luqad Kasta
Ku xir Google iyo Facebook Ads
Habyaalada Hore Loo Dhisay iyo Sawirrada Hantida
Shuraakadayada Teknolojiyadda App -ka waa BuildFire
Waxaan ku martigelineynaa Barnaamijyada adeegayaasha Amazon
Ku cusboonaysii App -kaaga Zapier iyo Qeyb
Tusaalooyinka App -ka Mobile -ka
Fiiri qaar ka mid ah barnaamijyada uu sameeyay dhiseheena moobiilka.
Soo dejiso Barnaamijyadeenna
Qiimaha iyo Qorshayaasha
Waxaan bixinnaa qorshayaal meheradaha iyo mashaariicda cabbirka leh.
Waxaad isku dayi kartaa adeeggayaga 30 maalmood oo bilaash ah, looma baahna kaarka deynta iyo haddii aad go'aansato inaad iska qorto mid ka mid ah qorshayaasheena,
waxaad kaloo heli doontaa 30 maalmood oo dammaanad-celin lacag-celin ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo dhisitaanka appkaaga.
Keydso: $ 324
Barnaamijyada Android iyo macruufka
Qalabka Mobile -ka iyo Tablet -ka
Soo gudbinta App-ka bilaashka ah
Sare u qaad barnaamijkaaga oo leh awood iyo astaamo badan.
Keydso: $ 684
Kor ugu qaad barnaamijkaaga ganacsi fursadaha ugu badan.
Keydso: $ 2124
Cashuurta Aan Lagu Darin.
Ma waxaad tahay Hoyga Xoolaha,
ama Kooxda Samatabbixinta Xayawaanka?
Aynu taageerno hawshaada! Waxay noqon lahayd sharafteenna weyn
si loo caawiyo kuwa jecel xayawaanka inay u dhisaan barnaamijyo gabi ahaanba bilaash ah.
Nala soo xiriir si aad wax badan ka bartaan.
Ma waxaad tahay Hay’ad ama Iibiye,
ama aad leedahay barnaamijyo badan?
Ku biir barnaamijka iskaashatada Iibiyaha oo kasbasho qiimo dhimis nololeed dhammaan adeegyadayada la bixiyo.
Booqo Iibiyaasha si aad wax badan ka bartaan.
Ma haysaa su'aal? Ka hel jawaabaha gudaha Base aqoonta ama booqo Help Center.
Blog -ka App
Hel xeeladaha kobcinta moobiilka ee ugu dambeeyay, isbeddellada iyo cusboonaysiinta.
Waa maxay Bogga Wax soo saarka?
Hagaajinta Bogga Wax soo saarka ee Apple (PPO) waa mid ka mid ah sifooyinka xiisaha leh ee dhawaanahan ee horumariyeyasha abka iyo suuqgeynayaasha. Iyada oo malaayiin apps laga helayo App Store, way sii adkaanaysaa in la dareemo. Taasi waa sababta adeegsiga bogga wax soo saarka ee hagaajinta ay hubaal ahaan ku siin doonto gees ka sarreeya tartankaaga. Waa maxay hagaajinta bogga alaabta? […]
Isbeddellada Ciyaaraha Mobilka iyo Sida Loo Bedelo
Dabeecadda ciyaaraha mobilada ayaa sii socota inay horumarto sannad kasta, iyo sumcadda Facebook-ga ee ay dhawaan ku samaysay Meta waxay u badan tahay inay saameyn weyn ku yeelato mustaqbalka ciyaarahan. Facebook ayaa door weyn ka ciyaartay ka caawinta ciyaaraha mobilada inay caan ka helaan meesha ugu horeysa, iyo aragtiyo ku saabsan waxa xoogga la saaray 3D iyo farsamada casriga ah […]
11 Siyaabood Oo Loo Sameeyo Fiidyowyo Abaal-marin Leh Dakhliga In-App-ka Raacitaanka Isticmaalayaasha
Haddii aad raadinayso siyaabo aad ku sii wadi karto isticmaalayaasha si joogto ah ugu hawlan abkaaga oo aad sare ugu qaaddo sii haynta, xayeysiisyada fiidyaha abaal-marintu waa hab fiican oo sidaas lagu sameeyo. Fiidyowyada abaal-marintu waxay u sahlaan isticmaaleyaasha inay helaan abaal-marinno gudaha-app-ka ah qaarkood iyagoo eegaya xayaysiis muuqaal gaaban oo waqti go'an ah. Iyada oo ku xidhan abaalmarinta iyo noocyada […]
U kirayso khabiir bilaash ah
App-ka Ganacsiga e-Commerce
Fiiri qaar ka mid ah noocyadayada caalamiga ah:
Shuruudaha Isticmaalka · Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah · Guarantee Qanacsanaanta
Waxaan u isticmaalnaa kukiyada websaytkayaga si aan kuu siino waayo -aragnimada ugu habboon annagoo xusuusan dookhyadaada iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Adigoo gujinaya "Aqbal Dhammaan", waxaad oggolaatay adeegsiga DHAMMAAN cookies -ka.